We.com.mm - အသုပ်အထောင်းတွေနဲ့ စားရင် လိုက်ဖက်တဲ့ မုန့်ညှင်းဖြူထုပ် ဟင်းခါး
အသုပ်အထောင်းတွေနဲ့ စားရင် လိုက်ဖက်တဲ့ မုန့်ညှင်းဖြူထုပ် ဟင်းခါး
အသုပ်အထောင်းကိုမှ ကြိုက်တဲ့ ချစ်ချစ်တို့ အတွက် အခုတစ်ခါမှာတော့ အသုပ်အထောင်းတွေနဲ့ စားရင် လိုက်ဖက်တဲ့ ဟင်းခါးလေး တစ်မျိုးချက်နည်းလေးကို ပြောပြပေးပါမယ်။ ချက်ရတာကလည်း လွယ်လွယ်လေးနော်၊ ဒီတော့ ပါဝင်ပစ္စည်းနဲ့ ချက်နည်းလေးကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
၁. မုန့်ညှင်းဖြူထုပ် ( ၁ ထုပ် )
၂. ပဲပုတ်နှစ် ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း )
၃. ကြက်သွန်ဖြူ ( ၅ တက် )
၄. ငါးနီတူငါးခြောက် ( ၁၀ ကောင် )
၅. ငရုပ်ပွသီး အတောင့်ရှည် ( ၃ တောင့် )
၆. ရေ ( ဟင်းရည် တစ်ပွဲစာ )
၇. ဟင်းခပ်မှုန့် ( အနည်းငယ် )
၁. အရင်ဦးဆုံး မုန့်ညှင်းကို ရေနွှေးဖျောပါ။ ရေနွှေးဖျောပြီးရင် ရေအေးအေးနဲ့ ဆေးကြောပြီး အနေတော်အရွယ်လေးတွေ လှီးလိုက်ပါ။
၂. ပြီးရင် ချက်မယ့် ခွက်ထဲသို့ မုန့်ညှင်းရွက်တွေကို ထည့်ပါ။ ပြီးရင် ပဲပုတ်အနှစ်တွေကို ပါထည့်ပါ။ ဒါပြီးရင် ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ငရုပ်သီးစိမ်းကို ပါးပါးလေးတွေ လှီးပြီး ထည့်လိုက်ပါ။ ငါးခြောက်ကိုတော့ ခေါင်းချွေပြီး ထည့်ပါနော်။ ပြီးရင် ရေ ထည့်ပြီး ဟင်းရည်ကို ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်လိုက်ပါ။ ဟင်းရည်ဆူလာမှ ဟင်းခပ်အရသာမှုန့်တွေကို ထည့်ပါနော်။ ခဏကြာရင်တော့ အရသာရှိတဲ့ မုန့်ညှင်းထုပ်ဟင်းခါးကို ရရှိပါပြီနော်။
မာလာဟင်းကိုမှ ကြိုက်ပါတယ်ဆိုသူတွေအတွက် "မာလာKitchen"